Could Music Education Be the Key to Educational Success? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributor, Columnist » Could Music Education Be the Key to Educational Success?
Posted by kai on Sep 27, 2013 in Contributor, Columnist, Education |5comments
The US educational system is suffering, with falling test scores and low student performance after graduation. In many districts, the solution has been to cut what are perceived as extraneous subjects and focus on the “core.” New evidence suggests that this strategy may actually be detrimental to children’s ability to learn effectively, however.
Cutting programs such as music lessons doesn’t make students better at math, science or English. In fact, it may decrease their ability to work effectively in these subjects. According toareport by the Public Broadcast System, early music education actually contributes to more effective student learning.
Children who have access to music theory education, guitar lessons and other music education opportunities seem to develop better physical coordination andagreater ability to pay attention to their work. They also have an edge when it comes to language skills. Music lessons can actually enhance early child language skills, enabling kids to pick up grammar and writing more readily, as well as increasing their ability to learn new languages.
There’s also research that suggests regular access to music education may help to boost children’s IQ. In one study, six-year-olds who received weekly voice and piano lessons experiencedaboost in intelligence by about three points over the course of nine months. Children in this study who were not exposed to any arts education saw no effect, while students who were exposed to theater lessons saw no IQ increase but gained social skills.
Kids who receive music education frequently go on to appreciate it. Inaseries of interviews published in the online edition of the Toronto Star,anumber of graduates mentioned that music coursework helped them find new careers and enjoy their schooling more. Several were unaware that music-related fields were available until they encountered the possibilities during their classes.
While arts education is often considered expendable when student performance is failing, the evidence suggests that it’s actually essential. A well-rounded education is key to boosting the ability to learn and experience the world fully.
မှတ်ချက်။ ။ အီးမေလ်းဖြင့်ပို့လာသည်ကိုတင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးလိုသူများအထက်ပါ တွစ်တာလင့်တွင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်ဆိုပါကြောင်း…။
ညှင်း ….. ညှင်းးးးးး
အခုစာကိုရေးတာ မြန်မာမဟုတ်ဖူးဗျ..။ မြန်မာ့မြူးဇစ်စိတ်ဝင်စားတဲ့..အဖြူကျောင်းသူတယောက်ပါ..။
ဂီတသင်ကြားခြင်းသည် ပညာရေးဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုအတွက် သော့တစ်ချောင်းဖြစ်လာနိုင်သလော။
စာမေးပွဲရမှတ်များ ကျဆင်းလာမှုနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဘွဲ့ရပြီးသား ကျောင်းသားများ၏ နိမ့်ပါးသောစွမ်းဆောင်ရည်တို့ကြောင့် US ပညာရေးစနစ်ခမျာ ဝေဒနာတစ်ရပ်ကို ခံစားနေရသည်။ ဒေသများစွာ`၌ ထိုပြဿ နာ၏ ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် အပိုဆာဒါးဟုမြင်ထားသော ဘာသာရပ်များကို ဖြုတ်ချ ဖြ တ်ချ၍ အဓိကဘာသာရပ်ကိုသာ ဗဟိုပြုထားခြင်းသည် အဖြေဖြစ်နေသည်။ ၄င်းနည်းစနစ်သည် ကလေးငယ်၏ ထက်ထက်မြက်မြက် သင်ယူနိုင်စွမ်းကို အမှန်တကယ် ထိခိုက်စေမည်ဟု အသစ်ထွက်ပေါ်လာသော သက်သေပြချက်များက ဖော်ပြထား၏။
ဂီတသင်ခန်းစာကဲ့သို့သော ဖြတ်ချလိုက်သည့် အစီအစဉ်များသည် ကျောင်းသားများအား သင်္ချာ၊ သိပ္ပံ သို့မဟုတ် အင်္ဂလိပ်စာ ဘာသာရပ်များတွင် ပိုကောင်းလာအောင် လုပ်မပေးပါ။ အမှန်မှာ ထိုလုပ်ရပ်သည် ကျောင်းသားများ၏ (အဆိုပါ ဘာသာရပ်များအား) သင်ယူနိုင်စွမ်း၊ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ကို လျော့ပါးစေနိုင်သည်။ Public Broadcast System ၏ အစီရင်ခံစာအရ စောစီးစွာ ဂီတပညာသင်ပေးခြင်းသည် ကျောင်းသား၏ သင်ယူနိုင်စွမ်းကို ပိုပြီး ထက်မြက်ထိရောက်စေသည်။
ဂီတသီဝရီ၊ ဂစ်တာသင်ခန်းစာ နှင့် အခြားဂီတပညာ အခွင့်အလမ်းများ ရရှိသော ကလေးများသည် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပိုမို၍ ကောင်းစွာ ဖွံ့ဖြိုးသည်။ မိမိတို့ အလုပ်အပေါ် အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း ပိုမြင့်မားကြသည်။ ဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုတွင်လည်း နှာတစ်ဖျားသာကြသည်။ ဂီတသင်ခန်းစာများသည် ကလေး၏ စဦးဘာသာစကား ကျွမ်းကျင်မှုကို ဧကန်မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ သဒ္ဒါပိုင်းနှင့် စာရေးသားခြင်းကို လွယ်လင့်တကူ ထိတွေ့ကျွမ်းဝင်သွားနိုင်ကြသည်။ ဘာသာစကားအသစ် သင်ယူနိုင်စွမ်းပါ မြင့်မားကြ၏။
ဂီတပညာ ပုံမှန်ရယူနေခြင်းသည် ကလေး၏ IQ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရာတွင် အပံ့အပိုးဖြစ်ကြောင်း သုတေသနပြုထားခြင်းရှိသည်။ လေ့လာမှုတစ်ခု`၌ အသံနှင့် စန္ဒရားသင်ခန်းစာ အပတ်စဉ် မှန်မှန်သင်ကြားနေသော ခြောက်နှစ်ရွယ် ကလေးတစ်ဦးသည် ကိုးလအကြာတွင် ဥာဏ်ရည် သုံးမှတ် တက်လာခဲ့သည်။ ထိုလေ့လာမှု`၌ မည်သည့်အနုပညာနှင့်မှ ထိတွေ့မထားသော ကလေးများတွင် အကျိုး သက်ရောက်မှုကို မတွေ့ခဲ့။ ဇာတ်သဘင်နှင့် ထိတွေ့ထားသော ကလေးများကား IQ မတက်သော်လည်း လူမှုရေးကျွမ်းကျင်လာကြသည်။
ဂီတပညာ မကြာမကြာ သင်ယူကြသော ကလေးများသည် ဂီတကို ဆက်လက်ပြီး ပျော်မွေ့သက်ဝင်သွား ကြသည်။ Toronto Star အွန်လိုင်း ထုတ်ဝေမှု၏ အတွဲလိုက် အင်တာဗျူးများတွင် ဘွဲ့ရပြီးသူ အမြောက်အများ၏ ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်မှာ ဂီတသင်တန်းတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်သည် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်သစ်ရှာဖွေရာတွင် အကူအညီပေးပြီး ကျောင်းပညာရပ်တွင်လည်း ပိုမို ပျော်မွေ့လာစေသည် ဟူ၏။ ဂီတနှင့်ဆက်စပ်သော ပညာရပ်နယ်ပယ်ကို ရနိုင်ကြောင်း အတော်များများက သတိမထားမိကြ။ အတန်းတက်နေစဉ်ကာလအတွင်း မမျှော်လင့်ဘဲ ထိုအလားအလာကို ကြုံ ကြိုက်လိုက်ရသည်အထိ အတော်များများသည် သတိမထားမိခဲ့ကြချေ။
အနုပညာသင်ကြားခြင်းကို ဖျက်ပစ်လိုက်နိုင်သည်ဟု မကြာခဏ မှတ်ယူနေကြစဉ်တွင် ကျောင်းသားစွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းလာသောအခါ အနုပညာသင်ကြားခြင်းသည် အမှန်တကယ် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည်ဟု ထိုလက္ခဏာက ညွှန်ပြခဲ့သည်။ လောကကမ္ဘာအား သင်ကြားရာနှင့် အတွေ့အကြုံ ရယူရာတွင် ဘက်စုံပညာရေးသည်သာ စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးသော သော့တံတစ်ချောင်း ဖြစ်ပေသည်။ ။
အဲဒီအကြောင်းအရာလေးကို တအားကြိုက်လို့ ကတိုက်ကရိုက် ဗာသာပျံ ကြည့်တာပါ။ စာမချောရင် သီးခံကြပါချင့်။
ပထမအချက်အနေနဲ့ မြန်မာကျောင်းတွေမှာ ဂီတပညာသင်ကြားခြင်းကို လုံးဝ ကန့်ကွက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို မဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ တူရိယာတွေ အင်မတန်ဈေးကြီးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၅နှစ်လောက်တုန်းကတောင် grand piano အဟောင်းတစ်လုံးကို သိန်း ၁၀၀ ရှိပါတယ်။ ဟုတ်ပါပြီ။ အဲဒီလို ရှယ်ကြီးတွေ မဟုတ်ဘဲ သာမန်လေးတွေဆိုရင်ကော။ တယောတို့ ဂစ်တာတို့ — ဒါလည်း မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အဲဒါတွေလည်း သိန်းဂဏန်းရှိပါတယ်။ ဒါဆို မြန်မာတူရိယာတွေကော။ အဲဒါကလည်း မဖြစ်နိုင်သေးဘူး။ အသံအောင်တဲ့ ပတ္တလားတစ်လုံးဆိုရင် ဈေးကိုနင့်နေတာ။ ဒါကြောင့် ပလွေလောက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ ဘင်ခရာတီးဝိုင်းကိုတော့ ထောက်ခံပါတယ်။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ ဘာသာစကားကို ဂီတနဲ့သင်တာကိုတော့ အကြီးအကျယ်ထောက်ခံပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာ။ အဲဒါအတွက် စကရင်ကြီးကြီး မော်နီတာနဲ့ ကွန်ပြူတာတစ်လုံးဆိုရင် ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်လိုင်းကောင်းကောင်းနဲ့ ကလေးတွေကို အွန်လိုင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်တာ သိပ်ကို ထိရောက်ပါတယ်။ starfall တို့ British council တို့လို ဆိုက်မျိုးမှာ ကလေးသီချင်းကောင်းကောင်းလေးတွေ ပေါမှပေါ။ အဲဒါလေးတွေကို ကလေးတွေလိုက်ဆိုိခိုင်း၊ ပြီးရင် ကူးရေး၊ ပြီးမှ တစ်လုံးချင်း ပြောပြရင် အင်္ဂလိပ်စာ မတတ် ခံနိုင်ရိုးလား။
အဲဒီပို့စ်လေးတင်ပေးတဲ့အတွက် သိပ်ကို ကျေနပ်မိပါတယ် သကြီး။
ဘာသာပြန်ပျင်းတဲ့ သဂျီးနဲ့ အီးစာမကျွမ်းတဲ့ ရွာသူားတွေကို ပေါင်းကူးပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေက ဆန်ဖရန်တက်တော့…ဆန်ဖရန်က.. ထေရ၀ါဒအသင်းကြီးက..ကလေးတွေကို.. မေတ္တာပို့ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ၂ဘာသာနဲ့ သင်ပေးပြီး.. ဖျော်ဖြေပွဲပါဖောမင်န့်လုပ်ခိုင်းနေတာတွေ့ခဲ့ရတယ်..။
.. နောက်က မြုးဇစ်နဲ့လိုက်ပြီး သီချင်းလုပ်ဆိုတာပါ..။
အဲလိုလုပ်တော့ ကလေးတွေ အင်မတန်စိတ်ဝင်စားကြတာပဲ..။ မြန်မာစာ/စကားပါတတ်ကုန်တာ..